“Zvamakasvika Pakuziva Mwari”—Chii Chasara? | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Makasvika pakuziva Mwari.”—VAG. 4:9.
Nei zvichibatsira kuongorora kunamata kwedu nguva nenguva?
Nei vaKristu vakasimba pakunamata vachifanirawo kuramba vachikura?
Nei tichifanira kufungisisa nezvekutenda kwedu uye kuzvitsaurira kwatakaita kuna Jehovha?
1. Nei mutyairi wendege achifanira kuongorora ndege isati yasimuka?
VATYAIRI veimwe ndege yemhando inoshanda zvakanaka chaizvo kukunda dzimwe dzose vanotanga vaongorora zvinhu zvinopfuura 30 vasati vasimuka. Kana vakasanyatsoongorora chinhu chimwe nechimwe vasati vasimuka, vanowedzerawo mikana yokupinda munjodzi yakaipa kwazvo. Unoziva here kuti mutyairi upi anonyanya kukurudzirwa kuongorora zvinhu izvozvo nguva dzose? Ndeuya agara nebasa! Zviri nyore kuti mutyairi iyeye avimbe neunyanzvi hwake okundikana kunyatsoongorora kamwe nekamwe ndege isati yasimuka.
2. VaKristu vanokurudzirwa kuzviongorora pachii?
2 Kufanana nomutyairi wendege akangwarira nyaya yokuchengeteka, unogona kuzviongorora kuti uone kana usingazorasikirwi nekutenda kana wava pamuedzo. Pasinei nokuti uchangobva kubhabhatidzwa kana kuti wave uchishumira Mwari kwemakore, zvinokosha kuti ugare uchiongorora kutenda uye kuzvipira kwako kuna Jehovha Mwari. Kana ukakundikana kugara uchinyatsozviongorora, unogona kukanganisika pakunamata. Bhaibheri rinotiyambira kuti: “Anofunga kuti akamira ngaachenjere kuti arege kuwa.”—1 VaK. 10:12.
3. VaKristu vomuGaratiya vaifanira kuitei?
3 VaKristu vaiva muGaratiya vaifanira kuongorora kudzama kwainge kwakaita kutenda kwavo uye kukoshesa rusununguko rwavakapiwa naMwari. Achishandisa chibayiro chake, Jesu ainge aita kuti vaya vaitenda maari vakwanise kuziva Mwari neimwe nzira inokosha kwazvo, yokuti vaigona kuva vanakomana vaMwari! (VaG. 4:9) Kuti varambe vaine ukama ihwohwo hwakaropafadzwa, vaGaratiya vaifanira kuramba dzidziso dzevamwe vaKristu vaikurudzira chitendero chechiJudha, vaisimbirira pakuti vaifanira kuchengeta Mutemo waMosesi. Asika vaKristu veMamwe Marudzi vaiva muungano vainge vasina kumbobvira vava pasi pomutemo! Vose, vaJudha uye veMamwe Marudzi vaifanira kufambira mberi pane zvokunamata. Izvi zvaisanganisira kuziva kuti vaisakwanisa kuva vakarurama nokuchengeta Mutemo waMosesi.
MATANHO OKUTANGA OKUTI MUNHU AZIVE MWARI
4, 5. Pauro akapa vaGaratiya zano rokutii, uye nei richikoshawo kwatiri?
4 Zano romuapostora Pauro kuvaGaratiya raiva nechinangwa: chokuti vaKristu vechokwadi vepanguva chero ipi zvayo vasafuratire pfuma yechokwadi cheBhaibheri vodzokera kuzvinhu zvavakasiya shure. Jehovha akafemera muapostora wacho kuti akurudzire ungano dzaiva muGaratiya uyewo vanamati vake vose kuti varambe vakasimba.
5 Zvakanaka kuti tose tiyeuke kuti takasunungurwa sei panyaya yokunamata ndokuva mumwe weZvapupu zvaJehovha. Kuti udaro, funga nezvemibvunzo miviri iyi: Unoyeuka here matanho awakatora kuti uzobhabhatidzwa? Unoyeuka here kuti wakasvika sei pakuziva uye kuzivikanwa naMwari, zvikaita kuti unyatsosununguka pane zvokunamata?
6. Zvinhu zvipi zvatinofanira kuongorora zvatichakurukura?
6 Tose zvedu tine matanho mapfumbamwe atakatora. Matanho iwayo ari mubhokisi rakanzi “Matanho Anoita Kuti Munhu Abhabhatidzwe Uye Arambe Achifambira Mberi.” Kugara tichizviyeuchidza nezvematanho aya mapfumbamwe kuchatisimbisa kuti tirege kudzokera kuzvinhu zvenyika. Sezvinoita mutyairi wendege agara nebasa uye akangwarira, uyo anobatsirwa nokutanga aongorora ndege yake, kuzviongorora pakunamata uchishandisa matanho iwayo kuchakubatsirawo kuramba uchishumira wakatendeka.
VAYA VANOZIVIKANWA NAMWARI VANORAMBA VACHIKURA PAKUNAMATA
7. Tinofanira kutevedzera muenzaniso upi uye nei tichifanira kudaro?
7 Mutyairi wendege anofanira kuyeuka kuti ane zvaanofanira kugara achiongorora ndege yake isati yasimuka. Isu tinogonawo kugara tichizviongorora uye kuona kuti tave tichiita sei kubvira patakabhabhatidzwa. Pauro akanyorera Timoti kuti: “Ramba wakabata muenzaniso wemashoko anopa utano awakanzwa kwandiri nokutenda norudo zviri muna Kristu Jesu.” (2 Tim. 1:13) “Mashoko anopa utano” iwayo ari muShoko raMwari. (1 Tim. 6:3) Kufanana nemufananidzo uri kutanga kunyorwa uyo unongoratidza zvauchange wakaita, ‘muenzaniso wechokwadi’ unongotibatsira kunzwisisa uye kuita zvinodiwa naJehovha. Saka ngationei matanho akaita kuti tisvike pakubhabhatidzwa kuti tione kana tiri kurarama zvinoenderana nemuenzaniso wechokwadi.
8, 9. (a) Nei tichifanira kuramba tichiwedzera zivo uye kutenda? (b) Taura muenzaniso unoratidza kukosha kwokukura pakunamata uye nei tichifanira kuramba tichikura.
8 Danho rokutanga nderokuwana zivo. Zvadaro munhu anenge ava kukwanisa kuva nekutenda. Asi tinofanira kuramba tichikura pazvose zviri zviviri. (2 VaT. 1:3) Kukura kunosanganisira kuchinja kunoramba kuchiitika. Kana chinhu ‘chichikura,’ chinenge chichiwedzera, kana kuva chihombe. Saka pashure pokunge tabhabhatidzwa tinofanira kuramba tichikura pakunamata, kuti tisaramba tiri panzvimbo imwe chete.
Muti unoramba uchikura. Ndizvo zvinofanira kuitawo vaKristu
9 Tinogona kuenzanisa kukura kwedu pakunamata nekukura kunoita muti. Muti unogona kukura chaizvo, kunyanya kana midzi yawo yakadzika uye ichienda kure. Somuenzaniso, mimwe misidhari yokuRebhanoni inogona kureba zvokuenzana nechivako chenhurikidzwa 12 uye iine midzi yakasimba, yakadzika uye hunde yacho inogona kukura zvokusvika mamita 12 kupoterera. (Rwiyo 5:15) Pakutanga, muti wacho unokura chaizvo zvinonyatsooneka wozoita sewamira, asi unenge uchikura kunyange zvingasanyatsooneka. Gore negore, hunde yacho inokura uye midzi yacho inodzika uye inowedzera kuenda kure, zvichiita kuti muti wacho uwedzere kutsiga. Ndizvo zvinogona kuitikawo pakukura kwemuKristu pakunamata. Tinogona kukura nokukurumidza kubva patinotanga kudzidza Bhaibheri tobva tabhabhatidzwa. Vaya vari muungano vanoona kufambira mberi kwatinenge tichiita. Zvimwe tingatosvika pakuva piyona kana kuwana dzimwe ropafadzo. Mumakore anozotevera, kukura kwedu pakunamata kungasanyatsooneka. Asi tinofanira kuramba tichiwedzera zivo uye kutenda kusvikira “tava munhu akura zvakakwana, tava nomwero wokukura kwakazara kwaKristu.” (VaEf. 4:13) Saka tinofambira mberi kusvikira tava muKristu akakura pakunamata, sezvinoita kamuti kanokura kusvikira kava zimuti.
10. Nei vaKristu vakasimba pakunamata vachifanirawo kuramba vachikura?
10 Asi kukura kwedu hakufaniri kugumira ipapo. Zivo yedu inofanira kuwedzera uye kutenda kwedu kunofanira kusimba. Izvi zvinobva zvaita kuti tidzike midzi muShoko raMwari. (Zvir. 12:3) Muungano yechiKristu, mune hama nehanzvadzi dzakawanda dzakaita izvozvo. Somuenzaniso, imwe hama yave iri mukuru kwemakore anopfuura 30 yakaona kuti ichiri kukura pakunamata. Inoti: “Kukoshesa kwandinoita Bhaibheri kwawedzera chaizvo. Ndinogara ndichiwana mikana yokushandisa mazano uye mitemo zveBhaibheri munzira dzakasiyana-siyana. Kukoshesa kwandinoita ushumiri kuri kuramba kuchiwedzerawo.”
RAMBA UCHISIMBISA USHAMWARI HWAKO NAMWARI
11. Tingasvika sei pakuziva Jehovha zviri nani nekufamba kwenguva?
11 Kukura kwedu kunosanganisirawo kuramba tichiswedera pedyo naJehovha seShamwari uye Baba vedu. Anoda kuti tinzwe takachengeteka uye tizive kuti anotida, sezvinoita mwana kana akabatwa nemubereki ane rudo kana kuti manzwiro atinoita tiine shamwari yechokwadi uye yatinovimba nayo. Unogona kubvuma kuti ushamwari ihwohwo naJehovha hahungoerekani hwavapo. Zvinototora nguva kuti tisvike pakumuziva uye pakumuda. Saka sezvaunowedzera kuziva Jehovha, tsunga kuwana nguva yokuverenga Shoko rake zuva rega rega. Verenga magazini imwe neimwe yeNharireyomurindi neMukai! pamwe nemamwe mabhuku esangano.
12. Chii chatinofanira kuita kuti tizivikanwe naJehovha?
12 Shamwari dzaMwari dzinokura pakunamata nokunyengetera nemwoyo wose uye nokuwadzana nevanhu vanoita zvakanaka. (Verenga Maraki 3:16.) “Nzeve [dzaJehovha] dziri pakuteterera kwavo.” (1 Pet. 3:12) Sezvinoita mubereki ane rudo, Jehovha anoteerera minyengetero yedu yokuchemera kubatsirwa. Saka tinofanira ‘kuramba tichinyengetera.’ (VaR. 12:12) Hazviiti kuti tirambe tiri muKristu akakura pakunamata kana tisingabatsirwi naMwari. Matambudziko enyika ino akaoma kuti tiakunde tiri toga. Kana tikarega kunyengetera, izvozvo zvichaita kuti tisawana simba iro Mwari anoda kutipa uye raanogona kutipa. Unogutsikana here nezvakaita minyengetero yako, kana kuti unoona kuti unofanira kuivandudza?—Jer. 16:19.
13. Nei kuwadzana nevamwe vaKristu kuchikosha kana tichida kukura pakunamata?
13 Jehovha anofarira vose vaya “vanopotera kwaari”; saka kunyange patinenge tasvika pakuziva Mwari, tinoda kuramba tichiwadzana neungano yevamwe vanomuziva. (Nah. 1:7) Munyika izere nevanhu vasingakurudziri, tinoratidza kuti takachenjera nokugara tichiwadzana nehama nehanzvadzi dzedu dzinotikurudzira. Izvozvo zvinotibatsira sei? Muungano unowana vanhu vanokukurudzira “kuva norudo nemabasa akanaka kwazvo.” (VaH. 10:24, 25) Kudanana kwakanyorwa naPauro nezvako kuvaHebheru kunoita kuti tive sangano, boka revanamati vane pfungwa dzakafanana, kana kuti ungano. Kudanana kwakadaro kunosanganisira kuwadzana nevamwe vaKristu. Gara uchiongorora kuti uri kupinda misangano uye kuti uri kuvawo nezvaunoita pamisangano yacho here.
14. Nei kupfidza uye kutendeuka zvichifanira kuramba zvichiitwa?
14 Kuti tizova vaKristu, taitofanira kupfidza uye kutendeuka, kana kuti kusiya zvivi zvedu. Asi kupfidza kunoramba kuchiitwa. Sezvo tisina kukwana, chivi chiri matiri chinoramba chakativandira sezvinoita nyoka yakagadzirira kuruma. (VaR. 3:9, 10; 6:12-14) Ngatigarei takangwaririra, tichiziva zvatinokanganisa. Zvinofadza kuti Jehovha anotiitira mwoyo murefu patinenge tichiedza kurwisa miedzo inogona kutikunda nyore nyore uye kugadzirisa panoda kugadziriswa. (VaF. 2:12; 2 Pet. 3:9) Tinobatsirwa zvakanyanya nokushandisa nguva nezvinhu zvedu nenzira yakanaka, torega kuvavarira zvinhu zvatinongoda isu. Imwe hanzvadzi yakanyora kuti: “Ndakarererwa muchokwadi, asi maonero andaiita Jehovha pandaikura ainge akasiyana neevakawanda. Ndaiona sokuti aifanira kutyiwa chaizvo, uye ndaifunga kuti ndaisazombokwanisa kumufadza.” Nekufamba kwenguva, hanzvadzi iyi yakazoona yava “kuenda kure naMwari” nemhaka yezvayaikanganisa. “Hakusi kuti ndaisada Jehovha,” anowedzera kudaro, “asi ndaisanyatsomuziva. Zvisinei, pashure pokunyengetera zvakasimba kakawanda, ndakatanga kuchinja.” Akawedzera kuti: “Ndakaona kuti Jehovha akanditungamirira semwana, achindibatsira kukunda chipingamupinyi chimwe nechimwe panguva, nounyoro, achindiratidza zvandaifanira kuita.”
15. Jesu naBaba vake vanocherechedza chii?
15 “Rambai muchitaura nevanhu” nezvemashoko akanaka. Ngirozi yaMwari yakaudza Petro nevamwe vaapostora mashoko aya pashure pokunge vasunungurwa kubva mujeri nenzira inoshamisa. (Mab. 5:19-21) Chokwadi, tinofanirawo kugara tichiongorora kuti tinobuda muushumiri vhiki nevhiki here. Jesu naBaba vake vanocherechedza kutenda kwedu uye ushumiri hwedu. (Zvak. 2:19) Mukuru ambotaurwa mune imwe ndima akatoti: “Isu tinozivikanwa nebasa roushumiri.”
16. Nei zvakanaka kuti tifunge nezvekuzvitsaurira kwatakaita kuna Jehovha?
16 Funga kuzvitsaurira kwawakaita. Ukama hwatiinahwo naJehovha ndicho chinhu chinokosha kupfuura zvimwe zvose. Anoziva vanhu vake. (Verenga Isaya 44:5.) Nyengetera uye ongorora zvakaita ukama hwako naye. Uyewo yeuka zuva rinokosha rawakabhabhatidzwa. Izvi zvichakuyeuchidzawo kuti kubhabhatidzwa kwako kunoratidza chisarudzo chinokosha pane zvose zvawakaita.
RAMBA URI PEDYO NAJEHOVHA NOKUTSUNGIRIRA
17. Nei tichifanira kutsungirira kana tichida kuramba tiri pedyo naJehovha?
17 Paainyorera vaGaratiya, Pauro akasimbisa nyaya yokutsungirira. (VaG. 6:9) Izvozvo zvinokoshawo kumuKristu mazuva ano. Uchasangana nemiedzo, asi Jehovha achakubatsira. Ramba uchinyengeterera mudzimu mutsvene. Uchanzwa wazorodzwa paanochinja kusuruvara kuchiva mufaro uye kunetseka kuchiva rugare. (Mat. 7:7-11) Funga nezveizvi: Kana Jehovha achitarisira shiri, angatadza here kukutarisirai imi vanomuda uye vakazvipira kwaari? (Mat. 10:29-31) Pasinei nematambudziko aungasangana nawo, usambofa wakadzokera shure kana kukanda mapfumo pasi. Chokwadi tine makomborero akawanda nemhaka yokuti tinozivikanwa naJehovha!
18. ‘Zvawakasvika pakuziva Mwari’ wava kuda kuitei iye zvino?
18 Saka, kana uchangobva kuziva Mwari uye kubhabhatidzwa, chii chasara? Ramba uchiwedzera kuziva Jehovha, kuti usvike pakuva muKristu akakura pakunamata. Uye kana wava nemakore wakabhabhatidzwa, chii chasara? Unofanirawo kudzamisa uye kuwedzera kuziva kwaunoita Jehovha. Ngatisangogutsikana chete neukama hwatiinahwo naye. Asi tinofanira kugara tichiongorora kunamata kwedu kuti tive nechokwadi chokuti tiri kuramba tichikura pakuva neukama naBaba vedu vane rudo, Shamwari yedu, Mwari wedu, Jehovha.—Verenga 2 VaKorinde 13:5, 6.
MATANHO ANOITA KUTI MUNHU ABHABHATIDZWE UYE ARAMBE ACHIFAMBIRA MBERI
Tinotanga ‘nokuwana zivo’ yaJehovha neMwanakomana wake Jesu Kristu.—Joh. 17:3
Kuwedzera kunoita zivo yedu kunoita kuti kutenda kwedu kuwedzerewo.—Joh. 3:16
Tinogara tichidana kuna Jehovha tichinyengetera.—Mab. 2:21
Tinonzwisisa kukosha kwekugara tichiwadzana nevamwe vane kutenda kwakafanana nokwedu.—VaH. 10:24, 25
Tinopfidza zvivi zvedu.—Mab. 17:30
Tinotendeuka, tosiya zvakaipa.—Mab. 3:19
Kutenda kwedu kunoita kuti titaure chokwadi kune vamwe.—2 VaK. 4:13
Tinozvitsaurira kuna Jehovha kuti tinyatsotevedzera Jesu.—1 Pet. 4:2
Takaratidza kuzvitsaurira kwedu nokubhabhatidzwa mumvura.—1 Pet. 3:21